မြန်မာ - အိန္ဒိယနယ်စပ် ဖြတ်သန်းသည့် နိုင်ငံခြားသားများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဖြတ်သန်းခ ကောက? - Yangon Media Group
ရိခေါဒါရ်၊ ဇွန် ၂၂
အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှ ချင်းပြည်နယ် ရိခေါဒါရ် မြို့သို့ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်ကို ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်လာမည့် နိုင်ငံ ခြားသားများ ဖြတ်သန်းခကို ဇွန် ၂ဝ ရက်မှစ၍ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရိခေါဒါရ်မြို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့်ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာဦးစီးဌာနရုံးမှ သိရသည်။
ယခင်က နယ်စပ်ဖြတ်သန်းသွားလာသူများအား နယ်စပ်ဖြတ်သန်းခပေးသွင်းရာတွင် အိန္ဒိယရူ ပီးငွေဖြင့် ပေးသွင်းစေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဇွန် ၂ဝ ရက်မှစ၍ မြန်မာကျပ် ငွေဖြင့် ပေးသွင်းသွားစေမည်ဖြစ်ကာ ထိုသို့ မြန်မာငွေဖြင့် ပေးသွင်းရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်၏ တနင်္လာနေ့ငွေ လဲလှယ်နှုန်းပေါက် ဈေးအတိုင်း အပတ်စဉ်သတ်မှတ် ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။
”အရင်က ဟိုဘက် ဒီဘက် နယ်စပ်တံတားဖြတ်သန်းသွား လာသူတွေကို အိန္ဒိယရူပီးငွေနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းခပေးဆောင်ရတာက အခုတော့ အိန္ဒိယဘက်ကနေ လာမယ်ဆိုရင် မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ ပေးသွင်းရပါမယ်။ အခု နယ်စပ်တံတားကို အိန္ဒိယဘက်က မော် တော်ကားဖြတ်သန်းခွင့်မပြုတော့တဲ့အတွက် အိန္ဒိယဘက်က လာ ရောက်သူနည်းပါတယ်။ မြန်မာဘက်ကနေလည်း ကုန်သည်တွေ လောက်ပဲ ဟိုဘက်ကို တစ်ရက်ကို ၁ဝ ဦးလောက်ပဲ သွားတာရှိပါ တယ်”ဟု မြို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့်ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာဦးစီးမှူးဦးတေဇာလင်းကပြောသည်။
လက်ရှိ နယ်စပ်ဖြတ်သန်း ခပေးသွင်းရာတွင် လူတစ်ဦးလျှင် ရူပီး ၁ဝ ရူပီး၊ ဆိုင်ကယ်တစ်စီး ၂၅ ရူပီးနှင့်မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး ရူပီး ၁ဝဝ ကောက်ခံလျက်ရှိပြီး နယ်စပ်ဖြတ်သန်းသွားလာအသုံး ပြုမှုအများစုမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ် ပြည်သူပြည်သားများ ဖြစ်ကြသည်။ ရိခေါဒါရ်သို့ လာရောက်သူ အများစုသည် နယ်စပ်တံတားမှ နှစ်မိုင်ခန့်ကွာဝေးသည့် အသည်းနှလုံးပုံသဏ္ဌာန်ရိဒ်ရေကန်သို့ လေ့လာရေးခရီးနှင့် အပန်းဖြေခရီး ဖြင့် လာရောက်လည်ပတ်သူများ ဖြစ်ကြကြောင်း သိရသည်။
ယခု ဘဏ္ဍာနှစ်မှ စတင်ကာ အသက် (၅) နှစ်နှင့် အထက် ဘိုးဘွားများကို လူမှုရေးပင်စင် ထောက်ပံ့ရန်အတွက် ??
ဂျပန်နှင့်ပွဲမှ အနီကတ်ကြောင့် ကားလို့စ် ဆန်းချက်ဇ် ခြိမ်းခြောက်ခံရ
မိမိတွင် ကိုယ်ပိုင်အိမ်၊ ကား၊ မြေယာ မရှိဟု မက္ကဆီကို သမ္မတပြော
အရင်တုန်းက တွေ့မြင်ခဲ့ရတာနဲ့မတူတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ကာရိုက်တာတွေကို အခုနောက်ပိုင်းမှာ တွေ့မြင?